Guddoomiyaha Magnet - Shiinaha Ningbo Sine
Guddoomiyaha Guddoomiyaha Magnet Magnet-saaraha Sine magnet-magnetic Company Limited Guddoomiyaha waa magaca guud ee birlabta joogto ah loo isticmaalo in sameecadaha, ku hadla iyo headphones. Magnet waa qaybo muhiim ah oo ka mid ah noocyada kala duwan ee badeecadaha. Waxay bixisaa beer joogto ah magnetic for gariiradda in afhayeenka, si degdeg ah talantaalli ah jihada of hadda wuxuu keenaa koorta birqaya iyo dib u, ka dibna signalka audio soo baxay afhayeenka. magnet la isticmaalo ee ku hadla iyo headphones waa m ...
Guddoomiyaha Magnet-saaraha Sine magnetic Company Limited
magnet Guddoomiyaha waa magaca guud ee birlabta joogto ah loo isticmaalo in sameecadaha, ku hadla iyo headphones. Magnet waa qaybo muhiim ah oo ka mid ah noocyada kala duwan ee badeecadaha. Waxay bixisaa beer joogto ah magnetic for gariiradda in afhayeenka, si degdeg ah talantaalli ah jihada of hadda wuxuu keenaa koorta birqaya iyo dib u, ka dibna signalka audio soo baxay afhayeenka.
Magnet la isticmaalo ee ku hadla iyo headphones inta badan waa magnet neodymium iyo magnet ferrite . Waxaa loo qaabeeyey in giraanta ama disc ee tirada kala duwan. Magnet Ferrite waxaa badanaa loo isticmaalaa for dhamaadka hoose iyo sameecadaha cheap iyo headphones. Tayada ohyahay camalkooda ma wanaagsana ku filan. Magnet Gudoomiyaha Ferrite sida caadiga ah waa siddo waa weyn ee tirada of D72xd32x15mm, D60xd24x13mm, D90xd36x17mm, D90xd36x15mm, D36xd18x8mm, D80 x d40 x 10mm, D80x 15mm d40 x, D90 x d50 15mm x, D110x 15mm d60 x, D110 x d60 x 17mm, D110 x d60 18mm x iyo iwm
Iyadoo neodymium magnet-joogto ah waxaa marar badan codsatay in dhexdhexaad ah oo fasalka sare headphones. Tayada midab waa heer sare, barti dhawaaqa waa ka fiican, qaab cod wanaagsan oo boos oo duurka degganu waa sax. Iyadoo waxqabadka ka xoogbadan, magnet neodymium xajmi iyo iftiinka yar Leexin kartaa magnet-weyn ferrite xajmi weyn oo culus ee codsiyada qaar ka mid ah si tartiib tartiib ah.
tirada caadiga ah loo isticmaalo magnet Gudoomiyaha neodymium waa D50x12mm, D50x10mm, D6x1mm, D6x1.5mm, D6x5mm, D6.5 × 1.5mm, D6xd2x1.5mm, D12x1.5mm, D12.5 × 1.2mm iyo wixii la mid ah. kala duwan oo ka mid ah tirada laga beddeli karaa sida macaamiisha iyo dalabaadka isticmaala '.
Next: Bar Filter magnetic
Levitating Bluetooth Guddoomiyaha